I-Villa Paraíso Zirahuén "iKhabhinethi yeBouquet yoMtshakazi"
Inqugwala sinombuki zindwendwe onguClaudia
"I-Villa Paraíso", ibekwe elunxwemeni lweLake Zirahuén, kwaye le ndlu yenye ye-3 esinayo kule ndawo, ibizwa ngokuba yi "Bridal Bouquet Cabin", inendawo yabantu abadala aba-2 kwisicwangciso sothando kwaye inako. ilingane abantwana 2 abangaphantsi kweminyaka eli-12 ubudala.
Le khabhini inethafa elinetafile kunye negriza yokusetyenziswa kwayo kuphela. Unendawo yokupaka isithuthi esinye ngaphakathi egadini, ukuba uza nezithuthi ezininzi kufuneka uzishiye ngaphandle kweekhabhini.
Ikhabhinethi "iBouquet yoMtshakazi" Inebhedi enkulu ye-Queen Size kunye nebhedi yesofa, i-T.V, igumbi lokuhlambela eligcweleyo, ikhitshi elincinci elinomenzi wekofu, i-grill, isitovu kunye nazo zonke izixhobo (iipleyiti, iiglasi njl) kunye nefriji encinane.
Kufuphi neCabaña ungadla kwi-dock ephambili, kwidolophu yaseZirahuén iintlobo ezahlukeneyo zokutya, okanye kwiindawo zokutyela "Los Cedritos", "La Troje de Alá" kunye ne "Turijandi".
Unokutyelela i-Pátzcuaro (i-20 min), yidolophu yomlingo, apho unokufumana zonke iintlobo zobugcisa (i-Chuspata, i-Jícaras, i-Masks, i-Rebozos kunye nokunye okuninzi), unokutyelela iitempile zayo ezintle.
Kufuphi nePátzcuaro, eTzinzuntzan ungandwendwela "iLas Yácatas" eyindawo ye-archaeological, kunye ne-16th century Franciscan convent.
Kufutshane ukuya kwimizuzu eyi-10 kwakhona nguSanta Clara del Cobre, apho uya kufumana imisebenzi yezandla emihle yobhedu; Banokutyelela iindibano zocweyo baze babone indlela amagcisa enza ngayo yonke into, kunye nokuthenga ngexabiso lokuqala. E-Santa Clara i-Tortas de tostada, i-huchepos (i-corn tamale) kunye ne-gorditas zidumileyo. Bathengisa yonke into ekwiMain Square.
Nasiphi na isikhalazo abanaso, isicelo esikhethekileyo, isiphakamiso, ukuba bafuna ukwazi ngakumbi malunga neendawo ezingqongileyo, ukuba batyelele ntoni. Unganxibelelana noWhatsApp ku-4521236013
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Copándaro